Haweeney Soomaali ah oo ka dhacday dabaq saddex biyaano ah si ay uga dhuumato booliska Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Haweeney Soomaali ah oo lagu magacaabo Nadiifo Cabdi ayaa kasoo dhacday dabaq 3 biyaano ah, iyadoo dooneysay iney ka dhuumato booliska Kenya oo saqdii habeenimo guriga ay degantahay ugu garaacay si ay u xiraan.
Gabadhan ayaa markii boolisku u garaaceen qolka ay degantahay waxey isku dayday iney isku qariso dariishada guriga ay deganeyd oo ay kortay, waxaana la jabay biraha lagu xiro dariishadda, taasoo keentay iney dhulka u hoobato.
Gabadhan ayaa ka badbaaday shilkaas halista ah, inkastoo dhaawac culus dhabarka ka gaaray, waxeyna la hadashay BBC Somali, iyadoo lagu daweynayo Isbitaal lagu magacaabo Nairobi East.
Nadiifo Cabdi ayaa sheegtay iney dariishadda u kortay si uga dhuumato booliska Kenya oo xiri lahaa haddii u soo galaan, maadaama sida ay tiri aysan markaas heysan lacag ay isaga furdaamiso.
Nadiifo Cabdi waxey xustay iney dhowr jeer oo booliska isaga badbaadisay lacago laaluush ah oo ay siisay, kadib markii ay u sheegeen iney geynayaan halka lagu xiro Soomaalida laga raafayo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
DR. Salaad Garaad Maxamed oo ah dhaqtarka daweynaya gabadhan ayaa sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen gabadhaan ay ku ogaadeen inaan waxba gaarin cunug ay uurka ku sido, isagoo sheegay iney tahay uurrey 4 bilood ah.
DR. Salaad ayaa sheegay in gabadhan uu dhabarka ka gaaray dhaawac xoog leh, inkasoo uu xusay ineysan weli soo bixin natiijada baaritaan lagu ogaanayo in laf-hdbartu jabantahay iyo inkale.
Kenya ayaa qaadatay go’aan ah in la musaafiriyo dadka aan sharciga laheyn, dadka qaxootiga ahna tagaan xeryaha qaxootiga, waxaana ciidamada booliska dalkaasi xoog u adeegsanayaan fulinta go’aankaas.